MM File – Page 40 – Just another WordPress site
လမ်းဘေးမှာ ကုန်စိမ်းရောင်းခဲ့ပြီး ဆင်းရဲသားတွေအတွက် ဆေးရုံဆောက်ပေးခဲ့ သူ
လမ်းဘေးမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့ ကုန်စိမ်းသည် တစ်ယောက်က ဆေးရုံကြီးတစ်ရုံဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုရင် ယုံကြမလား မသိဘူး။ မယုံနိုင်စရာကောင်းပေမယ့် သူ့ရဲ့အိပ်မက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး အိန္ဒိယမှာ ရှိနေပါတယ်။ သူမနာမည်က ဆပ်ဘ်ဟာစီနီမစ်စ်ထရီ(subhashini mistry) ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့ Hanspukur ဆိုတဲ့ရွာမှာနေထိုင်သူပါ။ သူမကြောင့် ဒီရွာဟာ […]
ဟိုတစ်လောလေးကမှ ယွန်းဝင့်လွှာအောင်နဲ့ချစ်သူပုံစံတွေရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေတက်လာပြီးနောက် Facebook ပေါ်မှာဂယက်ထသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေက ထက်ထက်ထွန်းကိုယောက်ျားလျာလားမိန်းကလေးလားဆိုပြီး ဝေခွဲမရဖြစ်လာကြပါတယ်။ မိန်းကလေးချင်းကြိုက်တာလို့ထင်နေတဲ့လူတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်ထက်ထွန်းက Media တွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာ သေချာလေးဖြေကြားပေးထားပါတယ်။ ထက်ထက်ထွန်းက အဝတ်အစားကအစ ယောက်ျားလေးစတိုင်ဝတ်ရတာသဘောကျကြောင်းကို “ယောက်ျားလေးလိုဝတ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအရမ်း ပျော်လည်းပျော်တယ်။ကျေနပ်တယ်။ ပုံမှန်ဒီလိုပွဲတွေဘာတွေမှသာ မိန်းမဆန်ဆန်ဝတ်တာ အပြင်မှာလည်းတွေ့မှာပါ ထက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲဝတ်တာများတယ်ပေ့ါ။ ယောက်ျားပုံနဲ့လိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်”ဆိုပြီး ရယ်မောဖြေကြားထားပါတယ်။ […]
အစွမ်းထက် ထီပေါက်ဂါထာကို ရွတ်ပြီးထိုးနိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ထီဖွင့် ဖို့ ရက် နီး လာပြီမို့ အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ထီဖွင့်ဖို့လည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ….ဒါကြောင့် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာမင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါသည် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာရှေးကျမ်းရင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က…“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကကောဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် […]
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချဉ်းကပ်ပြီး စကားစမပြောခင်မှာကတည်းက သူမကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်နေဟန် ခန္ဓာဗေဒဘာသာစကားဆိုင်ရာ လှည့်ကွက်လေးတွေ သုံးတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စကားတစ်လုံးမှမပြောသေးပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အထာကျကျ ကျူနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ရှိတယ် ဆော်ရှိပြီး သားဆိုရင်တော့ စာဖတ်နေတာ ဒီမှာတင်ရပ်လိုက်ပါ။ ၁။ ရင်ဘတ်ကိုဖွင့်ထား ပြောချင်တာက […]
တစ်ကမ္ဘာလုံး အင်တာနက်အခမဲ့သုံးလိုရနိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးမယ့်သူ- Elon Musk
သိပ္ပွံပညာရှင်ကြီး Elon Musk ဟာ The Space X ဒုံးပျံကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလုံးကို ထောက်ပံ့ကြီးကြပ်နေသူဖြစ်ပြီး ရေဒါဂြိုဟ်တုတစ်လုံးလွှတ်တင်နိုင်မယ့် နည်းဗျူဟာတွေအကြောင်းကို သူက ပြောဆိုနေပါတယ်။ Musk နည်းဗျူဟာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသော ဂြိုဟ်တု ( ၂ )လုံးအတွက် နောက်ထပ်အပို ဒုံးပျံသယ်ထိပ်ဖူးတစ်ခုရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို Starlink […]
အရေးပေါ်အချိန်တွေမှာ အရမ်းအသုံးဝင်မယ့် နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်း (၇) မျိုး
သင့်ရဲ့ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းဟာ သင်ရနိုင်တဲ့ အကြီးမားဆုံး စွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ အရေးပေါ် အခြေအနေတွေ ရောက်လာတဲ့အခါ ဘေးမှာ အသင့်ရှိပြီးသား ပစ္စည်းတွေကို အသုံးချတတ်ခြင်းက သင့်ရဲ့ အသက်ကိုတောင် ကယ်နိုင်ပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေရောက်လာတဲ့အခါ အသုံးချလို့ရမယ့် ပစ္စည်း (၇) မျိုးအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ပီကေခွံနဲ့ မီးမွှေး brightside ခဲရောင်တစ်ဘက်ပါတဲ့ ပီကေခွံကို တစ်ဝက်ခေါက်ချပြီး ထောင့်ဖြတ် ညှပ်ချလိုက်ပါ။ […]
မီးရဲရဲ​ပေါ်တွင် လမ်းဖြတ်​​လျှောက်ခြင်းနှင့် က မ္ဘာကျော် လျှို့ ဝှက်ချက်နည်းလမ်း
၁ မီး ရဲရဲ​ပေါ်. လမ်းဖြတ်​​လျှောက် ​ရန်​ ​ကျောက်​ချဉ်​ရယ်​ သဲဆပ်​ပြာ/​ရွှေဝါဆပ်​ပြာ ဆတူ/အမျှ​ဖျော်​ ။လိမ်း။လိမ်းထားတဲ့​နေရာမှန်​သမျှ မီးမဟပ်​ /မီးမပူ ။ ၂ ထုံးကို အရုပ်​စုံ ထုလုပ်​ထား ။ ကျီးကန်းသည်း​ခြေကို ကြိမ်​လုံးထိပ်​ သုတ်​လိမ်းပြီး ထုံးရုပ်​ကို တို့လိုက်​တာနဲ့. မီးထ​တောက်​၏ ၃ နှင်းဆီပန်းကို […]
တစ်ယောက်ယောက်ကို ပိုက်ဆံချေးမယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်(၅)ချက်
ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကို ပိုက်ဆံချေးပေးရတာဟာ တော်တော်ကိုဖြေရှင်းရခက်ပြီး ပိုက်ဆံပြန်လိုချင်တဲ့အခါပြန်တောင်းဖို့ဆိုတာလည်း တော်တော်လက်ပေါက်ကပ်တဲ့ကိစ္စပါ။ အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ်အကုန်ခံပြီးချေးပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံလည်းဆုံးသွားနိုင်ပြီး အပေါင်းအသင်းတွေကြားကဆက်ဆံရေးလည်း ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်ယောက်ကို ပိုက်ဆံချေးမယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို မဖြစ်မနေ သိထားဖို့ လိုပါတယ်နော်။ (၁) ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ပါ shutterstock တစ်ယောက်ယောက်က ပိုက်ဆံလာချေးတဲ့အခါ ချေးပေးမှာလား မပေးဘူးလားဆိုတာ ပြတ်ပြတ်သားသား စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။ တကယ်လို့ သင်ကမချေးပေးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ရင် […]
ကွယ်လွန်သူတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အားလပ်ရက် တစ္ဆေပွဲတော်များ
ယနေ့ခေတ်မှာ သကြားလုံးတွေ၊ ရွှေဖရုံသီး မီးပုံးတွေနဲ့ တစ္ဆေသရဲသဏ္ဍာန် ခြယ်သထားတဲ့သူတွေကို မြင်ရရင်ပဲ ဟော်လိုဝိန်း ပွဲတော်ကျင်းပနေတယ် ဆိုတာ သိလာကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဟော်လိုဝိန်းပွဲတော်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကျင်းပကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခေါ်အဝေါ်ချင်း မတူပေမယ့် သေဆုံးသူတွေကို အလေးဂရုပြုပြီး အရိုအသေပေးတဲ့ ပွဲတော်တွေဟာ နိုင်ငံအလိုက် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ ကျင်းပပုံတွေ […]